नयाँ वर्ष २०२१ मा यी राशिको छ विवाहको शुभ योग, चाँडै बज्नेछ बाजा ! – Sandesh Press
नयाँ वर्ष २०२१ मा यी राशिको छ विवाहको शुभ योग, चाँडै बज्नेछ बाजा !
January 1, 2021 162
काठमाडौँ । हिन्दू धर्ममा विवाहलाई धेरै पवित्र बन्धन मानिन्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिको राशि, ग्रह र नक्षत्रले त्यस व्यक्ति को जीवन मा एक ठूलो प्रभाव पार्ने गर्दछ । ज्योतिष अनुसार, एक व्यक्ति को राशि उनको भविष्य र जीवनमा घट्ने घटनाहरुको बारेमा थाहा पाउन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक व्यक्तिको कुंडली हेरेर उसको पढाइ , रोजगार र विवाहको बारेमा जानकारी मिल्दछ ।
यस वर्ष, २०२० मा कोरोना महामारीको कारण, धेरै मानिसहरूले आफ्नो विवाहको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छन्। यो वर्ष, विवाहको शुभ समय डिसेम्बर ११ सम्म मात्र थियो। अब विवाहको शुभ समय नयाँ वर्ष २०२१ मा हो। ज्योतिष गणनाको अनुसार, नयाँ वर्ष २०२१ मा केही राशि चिन्हहरूको लागि विवाह बलियो हुँदै गइरहेको छ। आजको यस लेखमा हामी तपाइँलाई भन्दछौं कि कुन राशिको विवाहको लागि शहनाई २०२१ मा बज्न सक्छ त आउनुहोस् जानौँ ।
२०२१ को राशिफलका अनुसार, अर्को वर्ष मेष जातिको लागि विवाह सम्बन्धी मामिलाको बारेमा राम्रो खबर ल्याउने छ। यो वर्ष ती व्यक्तिहरूका लागि शुभ हुनेछ जसले आफ्नो जीवनसाथीलाई लामो समयदेखि खोजी गर्दै थिए तर केही कारणहरूले गर्दा उनीहरूका सम्बन्ध अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । २०२१ मा ग्रहहरूको थपसँगै, विवाहको कडा योग तपाईंको लागि बनेको छ। प्रेम विवाह गर्न चाहनेहरूले उनीहरूको घरमा कुरा गर्न सक्दछन्।
२०२१ को राशिफलका अनुसार नया वर्ष वृष राशिले यस व्यक्तिहरुका लागि विवाहका शुभ संकेतहरू लिएर आउँदछ। जो विवाह गर्न योजना गर्दै हुनुहुन्छ, विवाहको शहनाई २०२१ मा बज्न सक्छ। यदि तपाईं अविवाहित हुनुहुन्छ र तपाईंको जीवनसाथी खोज्दै हुनुहुन्छ भने, अब तपाईंको पर्खाइ अन्त हुनेछ।
२०२१ को राशिफलका अनुसार आगामी वर्ष मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि अत्यन्त अनुकूल हुनेछ। यो वर्ष, तपाईंको विवाह राम्रो हुनेछ। प्रेम प्रेमीहरूको लागि, पार्टनरसँग विवाहको प्रबल योग रहेको छ । जो व्यक्तिले कसैलाई मन पराउँछन् र प्रेम अभिव्यक्त गर्न चाहान्छन भने, उनीहरुलाई राम्रो परिणाम मिल्ने योग रहेको छ ।
२०२१ का राशिफलका अनुसार, यस २०२१ मा तुला राशिका व्यक्तिहरूको विवाहको शुभ मितिहरू छन्। यदि तपाईं विवाह गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने यस वर्ष तपाईं विवाह गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको प्रेम जीवन पनि यस वर्ष राम्रो हुनेछ र तपाईंको. आफ्नो पार्टनर संग राम्रो सम्बन्ध हुनेछ। विवाह प्रस्ताव अविवाहित मूल निवासीहरूको लागि आउन सक्छ। यस बर्ष, तपाईंको लागि विवाहको प्रबल योग रहेको छ ।
राशिफल २०२१ अनुसार, यो वर्ष कन्या राशिको मूल निवासीका लागि विवाहसँग सम्बन्धित शुभ समाचार ल्याउने छ। यो वर्ष अविवाहित व्यक्तिहरूको लागि धेरै शुभ हुनेछ। यस वर्ष तपाईंलाई विवाह प्रस्ताव र जीवनसाथी मिल्ने सम्भावना छ । वैवाहिक सम्बन्धमा यस वर्ष तपाईलाई भाग्यको पूर्ण साथ मिल्नेछ । यस बर्ष, तपाईंको जीवनमा कोही यस्ता व्यक्तिको आगमन हुनेछ जसले तपाईंको जीवनलाई आनन्द आनन्दैले भरिदिनेछ। यो वर्ष प्रेमीहरूको लागि पनि धेरै शुभ हुनेछ र पार्टनरसँग विवाहको प्रबल योग छ ।
Prevटिपरको ठक्करबाट दुई पैदलयात्रुको मृत्यु
Nextमनिप्लान्ट मात्र हैन यो विरुवामा पनि छ चमत्कारी लाभ, जसलाई मानिन्छ भाग्यको प्रतिक
बिहेकै दिन करिश्माले स्वेतालाई भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ भगवानलाई पैतालामुनी कुल्चिनुपर्छ’
स्वेता खड्काको नयाँ घर नजिकै भेटिए अर्का श्री कृष्ण | स्वेताको नब जोडीलाई यस्तो भने हेर्नुहोस्